तीज : यो चाड कस्को ? मिडियाको - झीगु डट कम
August 22, 2019 झीगु डट कम	0 Comments
नेपाल जात्रै जात्राको देश, चाडपर्वै चाडपर्वको देश । हनुमानढोका घुम्न आउनेका पछाडि ताँती लाग्ने गाइडहरु यस्तै भन्छन् । हो पनि । चाडपर्व त चाडपर्व नै हो नि चाहे त्यो सतारले मनाउने होस् चाहे त्यो बाहुनले मनाउने । न कम न ज्यादा । तर कुनै कुनै चाडलाई चाहीँ सत्रै परेको हुन्छ । देशमा सत्रसय चाडपर्व हुन्छन् तर यो तीज भन्ने जिनिसको चाहीँ आउनु दुइमहिना अघिदेखि राजधानीमा सल्याङबल्याङ शुरु भइसकेको हुन्छ । राजधानीमै फेरि । जुन ठाउँमा त महिनाको चारवटा जात्रा आएर, सरकारले जानी जानी बढाएको महँगीमा नुनतेल पनि किनेर खान नसकेर हत्ते भएको हुन्छ, त्यही राजधानीमा यो चाड भने चकाचौंघ भएर चम्किन्छ ।
जहाँ जसले जसरी यसको तारिफ गरेपनि यो तीज भनेको हिन्दु बाहुन क्षेत्रीहरु महिलाहरुको मात्र चाड हो । बाहुन क्षेत्री भनेकै ३० वा ३५ प्रतिशत मात्र । त्यो पनि महिलाहरु भनेको त्यसको आधा र भनेपछि यो चाड भनेको जतिसुकै हल्ला गरेपनि नेपालका १५ प्रतिशतको मात्र हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ ।
त्यतिमात्र पनि होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, चाड भनेकै हुनेखानेको हो । दिन भरी काम गरेर पनि साँझ भोकै सुत्नुपर्नेहरुका लागि नेपालमा कुनै चाडपर्व छैन, जात्रा रमाइलो छैन । जनसंख्या ३० प्रतिशत भएर पनि देशको ९० प्रतिशत स्रोतमा पाँचैऔंला डुबाएकाहरुलाई पनि तिमीहरु धनी भनेको मन पर्दैन, उठिहाल्छ, बाहुन क्षेत्रीमा पनि कहाँ सबै धनी छन् र, भारी बोकेर पनि खान नपाएकाहरु पनि छन् भने र बाहुनक्षेत्री डाक्टर प्रोफेसरहरु नै उफ्रिन्छन् । भनेपछि ती गरीब बाहुन क्षेत्री महिलाहरुले पनि त टिभीमा देखिने जस्तो छड्के तिलहरी र रातो नाइलनको सारी लगाएरै पशुपति महादेवको दर्शन गर्न जाँदैनन् होला । अब उनीहरुले मानेको तीज के तीज । त्यो पनि तीज भनेकै भडकिलो भएकोले अलि अलि कमाइ भएकाले त तीज नआओस् भनेर नै कामना गर्छन् होला ।
उता हिन्दु भएको कारणले दलितहरुको पनि हुनु त पर्ने थियो तर खै हिन्दु भइकन पनि हिन्दु मन्दिरमा जान नपाउनेहरुले तीज मनाए पनि न मनाएपनि के पो होला र ? तर कोही कोही रातो साडी लगाएर हिन्दु हुनुको जिम्मेवारी बोकेर हिन्दु मन्दिरमा जान्छन् र आफैलाई अपमानित हुनुको मज्जा लिन्छन् भने कसको के लाग्छ र ।
नेपालका जे पनि गर्छ मिडियाले गर्छ । उनीहरुकै हातमा देश । जसको शक्ति उसको भक्ति गर्ने मिडियाले किन तीजको भक्ति गर्छ भनेर सबै गम्छन् । कुरा के भने नेपालमा सबै सम्प्रदाय सम्प्रदाय भएको ले मिडिया पनि एउटा सम्प्रदाय भएको छ ।
गएको दुई तीन हप्तादेखि राष्ट्रिय भनिने ठुला आकारका पत्रिकाहरुमा हरेक दिन जस्तै तीजका कुनै न कुनै पक्षलाई तारीफ गरेर वा विकृति हटाऔं भनेर वा मौलिकता खोजी गर्ने भनेर स्थान पाइरहेको देख्छौं । यसको कारण पनि हामीलाई थाहा छ । अधिकांश ठुला पत्रपत्रिकाका प्रकाशक, सम्पादक बाहुन क्षेत्री छन् । अथवा त्यहाँ पत्रकार भएर काम गर्नेहरु बाहुन क्षेत्री हुन् । अब बाहुन क्षेत्रीले आफ्नो समुदायको चाडपर्वको बारेमा थाहा पाउनु, कलम चलाउनु त राम्रै कुरा हो । आफ्नो भनेको जे पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त उनीहरु आफ्नो धर्ममा लोग्नेको खुट्टा ढोग्नु, अझ् खुट्टा धोएको पानी खानु, लोग्नेको आयु बढोस् भनेर व्रत वस्नु, दतिवनले जिउ सफा गर्नु अदिलाई पनि वैज्ञानिक भन्छन् सिधै ।
उनीहरुले गरिरहेको पनि यति नै हो । एकजना मगरले भूमिपूजाको बारेमा लेख्नु, एकजना शेर्पाले ल्होसारको बारेमा लेख्नु र एकजना थारुले माघीको बारेमा लेख्नु जतिकै हो बाहुन क्षेत्रीले तीजको बारेमा लेख्नु पनि । तर यी साम्प्रदायिक लेखकहरु राज्य सत्ता आफ्नो भएको मातमा प्रायः यो चाड नै सम्पूर्ण नेपाली हरुले, भनेको शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार थारु सबैले भनाउँछन् भनेर ठोक्न भ्याउँछन् । जबकि हामीलाई थाहा छ, यसमा राष्ट्रियता जस्तो केही पनि छैन, होइन नै । यो त फगत उनीहरुको साम्प्रदायिक लेखनी मात्र हो । विशुद्ध सामाजिक कार्य ।
रासस जस्तो राज्यको स्रोतबाट चल्लने समाचार उत्पादक संस्थाले त खुलेआम तीज भनेको जातीय एकताको सद्भावको पर्व भनेर घोषणा गरे । यहाँसम्मकि त्यसमा एकजना नेवार महिलालाई भन्न लगाइएको छ — अन्य जनजाति समुदायले मनाउन थालेको भनेर । दिउँसै तारा देखाउने, त्यो पनि राज्यले?
कोहीले आफ्नो हातको कलमले जे लेखेनि, आफ्नो पैसा हालेर प्रकाशन गरेको पत्रिकामा जे छपाएनि कसैलाई मतलब हुनुपर्ने कुरा त होइन । तर पाठकहरु भनेका पनि कोही हुन् । एक जना राई, लिम्बु वा नेवार पाठकले १० रुपैंया वा ५ रुपैंया तिरेर राष्ट्रिय कहलाइएका पत्रिकाहरु बाहुनक्षेत्रीहरुले आफ्नो समुदायको चाडपर्वको बारेमा लेखेर पेज भरेको हेर्नलाई किन्दैन । तर अफसोच आजभोलि हरेक पत्रिका उनीहरुकै कुराले पेज भरिरहेको देखिन्छ । यो सब त देशका आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी र दलितहरुका लागि साँच्चै भनुं भने बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने जस्तै हो ।
म बाहुनक्षेत्रीलाई गाली गर्दिन । उनीहरुको चाड हो, उनीहरु नै मनाउन् । तर यहाँ प्रश्न आउँछ, यी राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाका पाठकहरु बाहुन क्षेत्री मात्र हुन् त? पक्कै होइन । भनेपछि हामी आदिवासी जनजातिहरुलाई पैसा तिराई तिराई यी बाहुनक्षेत्री प्रकाशक, सम्पादकहरुले उनीहरुको चाडपर्वको बारेमा यत्रोविधि किन पढ्न दिइरहेका छन्? हामी किन पैसा तिरेरै एउटा बाहुन क्षेत्रीले अर्को बाहुनक्षेत्रीलाई पढ्न भनेर तयार पारेको सामाग्री पढ्न माग्दैछौं ? हाम्रा नि आँखा छन् , हामीले देखेका छौं यी ठुला पत्रिकाले साकेला, चसोक ताङनाम, माघी, पहाँचह्रे, जात्रिका बारे कति जान्दछन् र कति लेख्छन् भन्ने कुरा ।
← सक्वय् नृसिंह जात्रा तःजिक हन
मध्यपुर थिमिइ भैल: प्याखं क्वचाल →
बौद्धतय्गु इहिपा थथे जूसा मंगल जुइ
December 7, 2019 झीगु डट कम 0
नेपाल खड्गी सेवा समितिको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन
January 31, 2020 झीगु डट कम 0